Mitombo ny Shepherdia: mamboly sy mikarakara moana mena - Famokarana voankazo - 2019
Shepherdia: ny endriky ny fambolena ny vahiny
Ny olona rehetra dia efa ela no nahafantatra fa manana takaitra mahasoa ny ranomasina. Nalaza nandritra ny taonjato maromaro manokana izy io mba hamokarana andiam-panafody maromaro vita amin'ny trondro fitsaboana, ary ny olona rehetra dia afaka miresaka momba ny tsiron-tsakafo mahavariana avy amin'io voankazo io. Ankoatra izany, ny kirihitr'ireo zavamaniry dia tsara tarehy tsara tarehy ary afaka mamolavola tsara ny tany. Tsy ela izay, dia nisy havany iray avy any Amerika Avaratra, Shepherdia, izay tena akaiky indrindra. Ny zavamaniry antsoina hoe mena mena, dia tsy misy latsaky ny moron-dranomasina mahazatra, izay ampiasaintsika, fa toa tsara kokoa ary tsara ho an'ny fampiasana ny tontolo iainana.
Karazana sy varieties
Fitsipika momba ny fikarakarana ny "mena mena"
Landscape Design sy Shepherdia
Vitsy ny fananana mahasoa
mpiandry Ny mahazatra dia miantso ny iray amin'ireo karazana telo an'ny fianakaviana Lokhovs. Ao anatin'ity fianakaviana ity dia ahitana sokatra hafa sy ny ranomasina mendri-kaja. Shepherdia dia kely kesika kely na tsia, izay avo 4 metatra. Io zavamaniry mahavelona io, ny karazan-kazo izay niainan'ireo mpamboly dia nianatra nanavaka ny voninkazo. Ao amin'ny kirihitr'olombelona izy ireo dia manodidina sy lehibe, ary amin'ny vehivavy - maivana sy madinika. Ny zavamaniry dia misy lamosina kely hatramin'ny 7 santimetatra amin'ny lava-pandriana tsara. Mivelatra ny felany alohan'ny hivoahan'ny voninkazo amin'ny tapany faharoa amin'ny volana avrily, vitsy sy mavo ny felana.
Fantatrao ve? Ao amin'ny vahoaka, manana anarana anarana maherin'ny 20 ny ranomasina mipoahan'ny ranomasina, ny malaza indrindra dia ny "volon'ondry", satria ny ronono matetika dia levona amin'ny alika Shepherd.
Ny zavamaniry dia manomboka mamokatra amin'ny taona faharoa. Ny vokatr'ireo Shepherdia dia boribory boribory mena misy loko mena manana teboka fotsy, ny diamitr'ilay voankazo dia mahatratra 0,5-1,5 santimetatra. Ireo tsiboboka ireo dia azo sakanana ho an'ny olombelona sy ny biby, tena mahafinaritra ny vorona izy ireo. Mahatsiaro maivamaivana izy ary mangidy kely. Miverina amin'ny faran'ny volana Aogositra izy ireo.
Mianara bebe kokoa momba ny fahasamihafana sy ny fambolena ny tavy, sy ny ady amin'ny aretina ary ny bibikely.
Araka ny voalazan'ny "The Plant List", misy karazany telo ny zavamaniry:
Canadian Shepherd - Tsy hazo tena mahazatra eo amin'ny latay-nay, satria noho ny voankazo mavo mena dia tsy misy tsirony. Vitsy dia vitsy no hita fa singa mampiavaka ny tontolo iainana.
Ravina boribory - Feno lava-pirazona boribory maitso maitso matevina. Ny sampan'ny zavamaniry mandritra ny fanamafisana ny voankazo dia saika amin'ny toerana tena izy. Ireo hazo dia nizara tsy misy afa-tsy tany Colorado noho ny tsy fisian'ny fanamafisana ny hafanana.
Shepherdia Silver - ireo karazam-borona malaza indrindra azo jerena manerana izao tontolo izao. Noho ny fahatsapana, ny sampan'io zavamaniry io dia toa tena volafotsy-fotsy. Ny voankazo Mpiandry dia mavo na mavo mangamaso-jiro miaraka amin'ny tsiro mitonona.
Ity karazana ity dia ahitana karazana malaza marobe: 'Goldeneye' sy 'Xanthocarpa'.
Zava-dehibe izany! Mampitandrina ireo dokotera fa ny vokatr'ireo volafotsy Shepherdia dia tsy azo sakanana amin'ny be loatra, satria ny berries dia misy tetrahydrogarmol, izay manana ny fananana hifehezana ny toe-batan'ny olona iray amin'ny fanovana ny toe-tsaina.
Shepherdia volafotsy tsara tsara ho an'ny tontolo eoropeaninaNoho izany, azo antoka fa nofidina ho toy ny mponina marefo sy marevaka ny tavy dacha. Mafanafana, mangirifiry amin'ny hain-tany, aretina voajanahary ary tsy mahazaka fikarakarana, mihinana tsara amin'ny hazo hafa, zavamaniry ary voninkazo.
Amin'ny ankapobeny, ny zavamaniry dia hampiova haingana ny tranokala. Ilaina ny mandinika fa ny "taho-omby" dia tia ny lafiny masoandro. Raha mahazo ny hazavana sy hafanana ampy ny mason'ny ranomasina amerikana, dia ho "misaotra" anao tsara izy, satria izany dia hanome anjara amin'ny voninkazo mamirifiry be, ary aoriana ny vokatra dia ho tsara kokoa sy mamy.
Ny rivotra mahery sy ny drafitra dia tsy hisy fiantraikany amin'ny hazo. Ankoatr'izany, raha mety ny manangona hazo kely eo amin'ilay tavy, dia hiaro ny fananana amin'ny rivotra matevina izy, mahatonga ny toerana mangina, mangatsiatsiaka ary miala.
Ho an'ny fambolena sy fiompiana fikarakarana bebe kokoa ho an'ny Shepherdia, dia mendrika ny hikarakarana ny votoaty tsara mety. Ny zavamaniry dia afaka mitoetra ao anatin'ny firazanana samihafa: tany maina, maitso ary na dia misy rano aza. Ny tany dia tsy maintsy mivaky, mba hampanan-karena ny oksizenina sy ny sakafo hafa. Tena tsara ny vokatra azo avy amin'ny tany, ka ambony lavitra noho izany ny fambolena hazo.
Vakio ihany koa ny momba ny fambolena sy ny fampiharana ny volombava medaly nentim-paharazana.
Ny fanangonam-bozaka Amerikana dia tena tsotra. Tsara kokoa ny manao izany amin'ny lohataona (amin'ny volana Aprily), mba hahafahan'ilay tovovavy hiorina tsara sy hihamatanjaka alohan'ny hanombohan'ny mangatsiaka amin'ny ririnina.
Diniho ny fepetra isan-tsokajiny amin'ny fambolena volon'ondry:
Mifidiana karazana kalitao amin'ny taona 1-1.5 taona.
Manao lavaka isika, ny halaliny dia mihoatra ny 40 santimetatra.
Ampidirintsika any amin'ny tany ny fasika mba hahamora kokoa, ary koa ny fehiloha (tokony ho 1: 1: 1 ny fisian'ny singa miaraka amin'ny tany).
Esory tsikelikely ny voan-javatra avy ao anaty fitoeran-drano mba tsy hanelingelina ny fototry ny orinasa.
Mandosira ny mpiandry ondry ao anaty lavaka ary mitsarà amin'ny tany.
Avy any ambony, tsy manondraka ny hazo loatra izahay.
Ny sapana dia asaina apetraka eo amin'ny 20-40 santimetatra eo ho eo. Aorian'ny fambolena an'i Shepherdia ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny fikarakarana dia ny fialany. Ny fantsona ny zana-tsipika amoron-dranomandry amerikana dia atolotra tsy tapaka indroa isan-kerinandro ary farafahakeliny telo volana raha vantany vao mamboly. Ny vatan-drano ampy tsara dia hanana fiantraikany tsara amin'ny fivoarana sy ny fivoaran'ny hazo.
Manoro hevitra anao izahay hamaky momba ireo toetra mahasoa ao amin'ny voanjo gumi (sûrer maro be), ary koa ny fomba hambolena kesika ao amin'ny firenena.
Ny famerenam-pahaizana mahomby amin'ny mpiandry ondry dia azo atao, toy ny amin'ny zavamaniry hafa, amin'ny voa sy ny zavamaniry. Ny tena manan-danja dia ny manatona an'io olana io ary manao izany tsara.
Famokarana voa - ny fotoana lava indrindra sy lava. Amin'ity tranga ity, ny loko voalohany sy ny voankazo avy amin'ny "berry berry" dia tsy hahafaly tsy ho ela - ao anatin'ny 4-5 taona. Na eo aza izany, ny voa dia endrika mahomby, ary mendrika ny zo izy. Ny algorithm dia toy izao manaraka izao:
Amin'ny Oktobra / Novambra, misy lavaka eo amin'ny 3 santimetre lalina dia misokatra eo amin'ny sehatra misokatra;
Ny voa dia napetraka ao anatin'io kirihitra io ary nafafy tamin'ny tany;
Ho an'ny vanim-potoana mangatsiaka, ny tranokala dia rakotra ranomandry.
Ny fisiahana voalohany dia miseho amin'ny Aprily, angamba amin'ny tapaky ny volana Mey. Amin'ny fararano, ny haavon'ny kirihitra dia mihoatra ny 20 santimetatra. Ny famerenana amin'ny toeram-ponenana maharitra dia tokony hatao amin'ny lohataona manaraka.
Ny fomba fambolena voajanahary amin'ny sokatra amerikana dia maro. Izany no famindrana ny faka fotsy ary mazava ho azy, ny grefy.
Ny karazany voalohany dia tamin'ny taona fahatelo tamin'ny fiainan-dry Shepherdia, izy dia manana fotodrafitrasa hita any amin'ny 2 metatra miala ny haavon'ny mainty ary azo esorina amin'ny reny. Ny zavamaniry bitika toy izany dia namboly toy ny voajanahary tsotra.
Ny karazany faharoa dia mety ho fomba fambolena malaza indrindra, izay manana tombony lehibe. Ny famotehana dia tsara satria rehefa misafidy izany ianao, dia afaka manavaka avy hatrany ilay tovovavy avy amin'ny vehivavy. Tena zava-dehibe amin'ny fambolena.
Ny fampielezana amin'ny fanapotehana dia toy izao manaraka izao:
Ny lohataona aloha dia misafidy grefy maitso miaraka amin'ny tsaramaso 2-4 ka hatramin'ny 15 santimetatra amin'ny halavany;
Manapaka tsara ireo sampana ireo;
Ataovy ny votoaty amin'ny vahaolana amin'ny vinaingitra biostimulation mandritra ny andro iray;
Ny ampitson'io, izy ireo dia manamboatra tarehimarika mihoatra ny 4 santimetatra ao amin'ny fasika sandry sy tapa-kazo any;
avy any ambony dia tsara kokoa ny manalefaka ny tany amin'ny foil;
Amin'ny tapaky ny fararano, ny hazo madinika dia efa mivoatra tsara ary vonona ny hivezivezy any amin'ny toerana maharitra.
Ny fikarakarana ny trondro amoron-dranomasina amerikana dia ny fandroahana, ny famafàna ny tany, ny fampiroboroboana sy ny fanakanana ny hazo.
Ny hazo "adult" dia mety ho rano, saingy tsy voatery. Amin'ny ankapobeny, ny shepherdie ampy ny voajanahary voajanahary, amin'ny fandroahana fanampiny ny zavamaniry dia mila fotoana maina mafana.
Ny famafazana ny tany sy ny fanalana ny tsimparifary dia tena manan-danja tokoa ho an'ny vahiny mpirenireny. Tokony hatao isaky ny roa volana izany.
Zava-dehibe izany! Mitandrema tsara rehefa mamaha ny tany, mba tsy hanimba ny fotodrafitr'io omby io, fa ny ampahany tena marefo amin'ilay hazo maniry eo akaikin'ny habakabaka.
Ny fambolena dia afaka indray mandeha isan-taona, mahatonga ny mineraly manankarena kalcioma, magnesium, toy ny hazo tsy tapaka.
Tokony hokapaina ny zavamaniry mba hahamora ny fahamendrehany sy ny toetrany. Izany dingana izany dia miankina amin'ny faniriana sy ny faniriantsika. Mba hahamora kokoa ny fijinjana, afaka mametra ny fitomboan'ny satroboninahitra kely amin'ny 2 metatra ianao. Tsy hisy fiantraikany eo amin'ny fahavokarana sy ny fampandrosoana izany. Ilaina foana ny fongotra ka tsy mavesatra loatra ny sampana ary tsy mandry amin'ny tany. Tsy voatery hidiran-doza ny ririnina any Amerika.
Silver Shefferdia - tian'ny mpanakanto maro. Ny aloky ny ravina sy ny ravina be dia be dia be dia be dia be. Ny hazo fihinam-bary dia tsara ho an'ny fananganana ny fototry ny faritra. Shepherdia dia tonga lafatra amin'ny fefy miafina izay nanjary lohahevitra momba ny tontolo iainana nandritra ny taona maro. Hanome tokantrano mahafinaritra izany, hanome latsa-danja an'i Provence. Ny "Firenena Frantsay" dia azo ampitoviana amin'ny tohotra madinidinika kely, ny fofom-bohiny, miaraka amin'i Sheferdia, dia hamorona antokom-pihetsikao mazava tsara. Experiment!
Fantatrao ve? Ireo Kanadiana mpahay siansa dia nahita zavatra ao amin'ny Shepherdia izay manakana ny fahabangana amin'ny fahitana. Ho avy tsy ho ela ny fanomanana miorina amin'ny "tsaramaso omby", izay tsy mitovy amin'ny vidiny ambany noho ny alahelohan'io onja io.
Ny toeram-pitsaboana amin'ny fitsaboana ofisialy dia tsy mbola nahita ny fampiharana azy, saingy ampiasaina betsaka amin'ny vahoaka amin'ny fisorohana sy fitsaboana katarrhal sy aretina virosy.
Ny berries dia mety ho levona na vao maina. Loharano mineraly. Ny voankazo amoron-dranomasina amerikana dia manankarena amin'ny fiterahana: glucose, ascorbic acid, pectins, vitamin A sy E, carotene.
Etsy an-danin'izany, ny fampiasana ny voankazo Amerikanina dia afaka manatsara ny hery fiarovan-tena, manatsara ny fiasan'ny rafi-pandrefesana, ny atiny.
Ny alikaola vahiny dia fomba hafa hanampiana ny karazana zaridaina sy ny sakafonao.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Shepherdia: ny endriky ny fambolena ny vahiny